drag Chain, Cable ကို Carrier စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Chain - Anjie
cable ကို Chain
MT စီးရီး (5mm မှစ. * 5mm - 60mm * 300mm)
MTK စီးရီး (20mm မှစ. * 30mm - 65mm * 300mm)
SK ကိုစီးရီး (25mm မှစ. * 38mm - 45mm * 150mm)
VMTK စီးရီး (25mm မှစ. * 30mm - 80mm * 300mm)
KJ စီးရီး (10 မီလီမီတာ * 6mm & 10 မီလီမီတာ * 16mm)
VSK စီးရီး (18mm မှစ. * 30mm - 45mm * 100mm)
စည်ပိုင်းစီးရီး (40 မီလီမီတာ မှစ. * 50mm - 50mm * 100mm)
(35mm * 50mm ကနေ - 45mm * 250mm) MTS စီးရီး
ကျနော်တို့ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုအာရုံစိုက်ပါ။ အရောင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သို့မဟုတ်ဧည့်သည်များအားလုံးအတှကျအချိန်နှင့်တိကျမှုသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်များကိုရည်ရွယ်ပါသည်။
အရည်အသွေးပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကြိုတင်အရေးပါမှုထားတော်မူ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နယ်ပယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်အများကြီးပိုခက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်လွန်ဖိုပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန် corrugated, ဆွဲကွင်းဆက်, လမ်းညွှန်ရထားလမ်းဖိုအဖုံးများထုတ်လုပ်မှုတွင်ပိုမိုထက် 13 နှစ်အတွေ့အကြုံရတယ်။
Shijiazhuang သွက်လက်ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့သည်အဖုံးဖိုလမ်းညွှန်ရထားလမ်းဆွဲကွင်းဆက်များထုတ်လုပ်မှုတွင်ပိုမိုထက် 13 နှစ်အတွေ့အကြုံတယ် 2008 ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်သည်နိုင်လွန်ဖိုပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန် corrugated ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုအတွက် cable ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရထားလမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအာရုံစိုက်။
ကျနော်တို့က 100 န်ထမ်းတွေအကြောင်းတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Hebei ပြည်နယ်၏ Yanshan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်နှင့် 6500 စတုရန်းမီတာ '' ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာအကြောင်းကိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး 300 အကြောင်းကိုစတုရန်းမီတာ '' ဧရိယာနှင့်အတူ, Shijiazhuang မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတည်နေရာဘေဂျင်းကနေ 400 အကြောင်းကိုကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပြည်ပနှင့်ပြည်တွင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုများနှင့် 13 နှစ်အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှု၏တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ, ကျနော်တို့က cable ကိုများနှင့်လမ်းပြရထားလမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကဲ့သို့ဖြစ်ရမှ ပို. ပို. ခိုင်ခံ့လာပြီနေကြသည်။
2019.11.25 အတွက် ShanghaiTex 2019 exibition ကိုင်
cable ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖောက်သည်။ အဆိုပါများအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်တပ်ဆင်ဆက်သွယ် ...
မီတာ 100 အရှေ့ဘက် 307 အမျိုးသားရေးအရန်လမ်းနှင့် Tianshan လမ်း, အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်, Shijiazhuang အကြားလမ်းဆုံ၏။
ENQUIRE ကို NOW က
Cable ကိုဝါယာကြိုး Chain, လျှပ်စစ် Cable ကို Chain, ပလပ်စတစ် Cable ကိုဆွဲ Chain, Cable ကိုဆွဲ Chain , cable ကို Chain, CNC Cable ကိုဆွဲ Chain ,